Iibiyeyaal - MICROchip Domain Registration Hosting
Barnaamijka Dib-u-iibiyeyaasha Diiwaangelinta Domain & Multidomain Hosting
Barnaamijka iibiyeyaasha waxaa loogu talagalay shabakadaha iyo wakaaladaha dhijitaalka ah iyo xirfadlayaasha adduunka oo dhan:
Multidomain Web Hosting & Diiwaangelinta Domain ee:
La-taliyayaasha IT-ga, wakaaladaha shabakada, guryaha software-ka, horumarinta webka iyo naqshadeeyayaasha, isgaarsiinta iyo wakaaladaha suuqgeynta webka.
Alaabooyinka gaarka ah.
Soo hel xalalka dhammaystiran, ee tolman
si loo daboolo baahiyahaaga.
Waanu kuu joognaa adiga.
Adeegga gargaarka mudnaanta leh 7 maalmood usbuucii.
Aynu wada dhisno fursadahaaga.
Qiimo dhimis ayaa loo hayaa
Liiska qiimaha gaarka ah.
Isku qor barnaamijka dib-u-iibiyeyaasha si aad u hesho
qiimo dhimis ilaa 45%.
Kaabayaasha aan ku bixinno adeegyada macaamiisheena waxay awoodaan inay bixiyaan dammaanad muhiim ah marka la eego waxqabadka iyo kalsoonida. Aaladaha shabakadaha muhiimka ah ayaa gabi ahaanba ah kuwo aan loo baahnayn si loo hubiyo sii wadida adeega haddii ay dhacdo in qalabku xumaado.
Khubaradayadu waxay si saadaalin ah ula socdaan arrin kasta oo ka mid ah Xarunta Xogta taasoo wax u dhimi karta sii wadida adeegga. 24/7 la socodka waa lama huraan si loo xaqiijiyo kalsoonida ugu badan ee adeegyada.
Xarumaha Xogta ee aan ku martigelinno adeegyada aan u fidinno macaamiisheena waa ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 27001 shahaado. Kaliya ilaalinta heerarka badbaadada sare waxaan awoodnay inaan u hoggaansanno xeerarka anshaxa ee CISPE oo aan la jaanqaadno qaanuunka cusub ee GDPR .
Mawqifyada istaraatiijiga ah
Waxaan ku dooranay xarumahayada xogta goobo istaraatiiji ah si loo fududeeyo fidinta shirkadaha macaamiisheena ee suuqyada caalamiga ah. Seddex xarumood oo xog ah oo ku yaal Jarmalka, saddex ku yaal Mareykanka, mid Nederlaan ah iyo mid Singapore ah.
Foomka ku buuxi faahfaahintaada waxaana kula soo xidhiidhi doona bilaa waajib mid ka mid ah khubaradayada.
Qaybta Qaybtala taliyayaasha ITwakaalada webkaguriga softwarehorumariye iyo naqshadeeyeisgaarsiinta iyo wakaaladaha suuqgeynta webkaWax kale (si kooban u sharax nooca hawsha)
Sharaxaad ka bixi ganacsigaaga
Shahaadooyinka Xarumahayaga Xogta
Badbaadada iyo Kalsoonida Waxaa lagu shahaadeeyay heerarka ugu sarreeya